I-Tatuantes iwebhusayithi ye-Actualidad Blog. Iwebhusayithi yethu inikezelwe ku- umhlaba wobuciko bomzimba, ikakhulukazi kuma-tattoos kepha nasekubhobozeni nakwezinye izinhlobo. Siphakamisa imiklamo yangempela ngenkathi sihlose ukuletha lonke ulwazi mayelana nokuthi ungawathola kanjani ama-tattoos, ukunakekelwa kwesikhumba, njll.
Ithimba lokuhlela leTatuantes lakhiwe bayazifela ngomhlaba wamathambo nobuciko bomzimba bayakujabulela ukwabelana ngolwazi lwabo nolwazi lwabo nawe. Uma futhi ufuna ukuba yingxenye yawo, unganqikazi sibhale ngaleli fomu.
Sekuyiminyaka eminingi ngithanda izwe lomdwebo. Nginezitayela eziningi futhi ezahlukahlukene. Izindabuko zakudala, isiMaori, isiJapane, njll. Ngakho-ke ngithemba ukuthi uyakuthanda lokho engizokuchaza ngakho ngamunye wabo.
Umlandeli wesitayela se-neo-bendabuko namathambo angavamile futhi angajwayelekile, akukho okufana nocezu olunendaba enhle ngemuva kwalo. Njengoba ngikwazi ukudweba noma yini eyinkimbinkimbi ukwedlula unodoli wenduku, kufanele ngizinze ekufundeni, ngibhale ngabo ... futhi bangenzele kona, kunjalo. Oziqhenyayo ngamathambo ayisithupha (indlela ayisikhombisa). Ngesikhathi sokuqala ngithola i-tattoo, angikwazanga ukubukeka. Ngesikhathi sokugcina, ngalala egurney.
Umama onamathathu, uthisha wezemfundo ekhethekile, i-psychopedagogue futhi uyathanda ukubhala nokubhala. Ngiyawathanda ama-tattoo futhi ngaphezu kokuwagqoka emzimbeni wami, ngiyakuthanda ukuthola nokufunda kabanzi ngawo. I-tattoo ngayinye iqukethe incazelo efihliwe futhi iyindaba yomuntu siqu ... okufanele ukuyithola.
Njengoba ngangimncane, ngangicacile ukuthi into yami kwakuwukuba nguthisha, kepha ngaphezu kokukwazi ukuyenza ibe yimpumelelo, ingahlanganiswa ngokuphelele nolunye uthando lwami: Ukubhala ngomhlaba wamathambo nokubhoboza. Ngoba kungukuvezwa kokugcina kokuphatha izinkumbulo nezikhathi ezihlala esikhunjeni. Noma ngubani oba munye, uyaphinda futhi ngikusho ngokuhlangenwe nakho!
Ngiyazifela ngakho konke okuphathelene nama-tattoos. Izitayela namasu ahlukahlukene, umlando wawo ... Ngiyazifela ngakho konke lokhu, futhi leyo yinto ekhombisa lapho ngikhuluma noma ngibhala ngazo.
Ngingumuntu obehlale ewuthanda umdwebo wamathambo. Ukwazi ngabo, umlando, isiko, nokuthi ungazinakekela kanjani kuyindlela yokuzilibazisa engiyithandayo. Futhi wabelane ngolwazi lwami ukuze ukwazi ukulujabulela.
Ngazalelwa eBarcelona eminyakeni engamashumi amathathu nambili eyedlule, isikhathi eside ngokwanele ukuba umuntu othanda ukwazi ngokwemvelo futhi abe budedengu ukuthi akujabulele ukufunda ngamathambo nokuthi abaluleke kangakanani kusiko lomhlaba jikelele. Futhi, usuvele uyazi ukuthi "akukho bungozi akukho ukuzijabulisa, akukho buhlungu akukho nzuzo" ... Uma ufuna ukwazi konke ngamathambo, ngithemba ukuthi uzithokozela izindatshana zami.
Into engiyithandayo kakhulu ama-tattoo. Okwamanje ngine-4 (cishe onke ama-geek!) Futhi ngezitayela ezahlukahlukene. Ngokuqinisekile ngizoqhubeka nokunyusa inani ngize ngiqedele imibono enginayo emqondweni. Futhi, ngiyathanda ukwazi umsuka nencazelo yama-tattoos.